Afriikaa Kibbaa: ANCn Zumaan bu'uu akka qabaatuuf murteesse' - BBC News Afaan Oromoo
Afriikaa Kibbaa: ANCn Zumaan bu'uu akka qabaatuuf murteesse'
Goodayyaa suuraa Yeroon aangoo Pirezidaanti Zuumaan balaa malaamaltummaatiin hagugameera
Paartiin Afriikaa Kibbaa biyya bulchaa jiru ANCn pirezidaanti Jaakob Zumaan aangoo gadhiisuuf waan didaniifu karaa seeraatiin gaafachuuf ta'u midiyaaleen gabaasan.
Murteen dabarfame kunis erga Mr Zumaan marii qondaaltoota paartichaa olaanoo waliin guyyaa Kibxataa sa'aatiiwwaniif taasisaniin boodadha ture.
Mr Zumaan gaheessi umuriin waggaa 75 kun ammas tole hinjennee yoo ta'e, paarlaamaa keessatti sagaleen akka itti kenammu taasifamu.
Ogganaan kunis bara 2009 irraa kaasanii biyyattii ogganaa kan turan yoo ta'u, malaamaltummaan himatamaa turan.
ANCnis karoora isaa kana ifa hintaasifne. Garuu maddiwwan paartichaa midiyaaleef mirkanneessaniiru.
Mr Zumaan dhiibbaa irra deebiin akka taayitaa gadhiisaniif taasifamaa turee yeroo Siyriil Raamaaphosaan oggansa paartiichaa erga fudhatanii kaasee didaniiru.
Jalqaba Mr. Raamaafoosaan walgahii koree hojii raawwachiftuu biyyaaleessaa ANC gadhiisanii bahuun gara mana jireenyaa Mr Zumaa deemuun yoo aangoo kan gadhii hindhiifne ta'ee akka irra deebiin waamaman itti himan. Booda gara ANC'tti deebii'an.
Mr Zumaan maal balleessanii?
Pirezedaantummaan Obbo Zumaa himannaa yakka malaamaltummaa irratti dhiyaatuun maqaa gaarii dhabeera.
Walitti dhufeenya inni maatii GUptaa, dureessa dhalataa Indiyaa ta'e kan mootummaa irrattillee dhiibbaa qaba jedhamee shakkamu, waliin baroota dhiyoo keessaa qabaataa dhufan beekamtiin isaanii akka gadi bu'u taasiseera.
Obbo Zumaafi Gubtaan lamaan isaanii garuu himannaa kana ni haalu.
Waanti hubatamuu qabu, Obbo ZUmaan himannaa isaanirratti dhiyaatu kanaan qabatamaan yakkamaa hin taane.
Kana cinaatti Obbo Zumaan ammallee naannoo baadiyaafi bakka naannoo dhaloota isaanii KwaZulu-Natal dabalatee baayyee jaallatamoodha.
Filannoon yeroo filannoon bara dhufu taasifamuuf jedhutti, Obbo Raamaafoozaanis deggertoonni Obbo Zumaa akka hin mufannee mirkaneeffachuu barbaadu.
Itti aanaa maaltu ta'a?
Gabaastonni akka jedhanitti Koreen Giddu-galeessaa Biyyaalessaa akka Obbo Zumaan gadi-dhiisu gaafatan mormuun isaaf rakkisaataasisa.
Akka seeraatti garuu isaan gaafataniif aangoo gadi lakkisuuf hin dirqamu.
Isaan akka aangoo gadi lakkisuuf gaafatanillee yoo barbaadan Obbo Zumaan pirezedaantii biyyattii ta'anii itti fufuu ni danda'u.
Haata'u malee, filannaa amantaa irratti dhabuu paarlaamaatu isaan eeggata. Kanaafis beellamni Guraandhala 22'tti qabameera.
Obbo Zumaan filannoo walfakkaatu isaan mudatee ture, amma garuu haala kana irra deebisiisu jedhamee hin eegamu. Sababiiin isaas, filannoo amantaa irratti dhabuu isaafi paartii isaaf akka qaaniitti/kabaja dhabsiisuutti ilaalama.
Miidiyaaleen Afirikaa Kibbaa aangoo gadi lakkisuu Obbo Zumaa akka hin oolletti dubbachuun "Zexit" maqaa jedhu moggaasaniiruuf.
Pirezedaantiin Afirikaa Kibbaa duraanii kan turan Taabii Mbeekii bara 2008 gadi dhiisan. Innis falmii aangoo itti aanaa isaa waliin ture wallaansoo qabaa ture.
Itti aanaan gaaffii itti dhiyeessaa tures nama waggaa itti aanettii pirezedaantii ta'e Jaaqob Zumaa ture.
Afriikaa Kibbaa: Jaakoob Zuumaa guyyoota muraasa keessatti aangoo lakkisu danda'u jedhame - ANC